Vula abacocekisi abomileyo badinga iziphi izinto kunye nobuchwepheshe?
Ziziphi izixhobo ozifunayo ukuvula abacoceli abomileyo? Ngokuqhelekileyo, abacoca abacocekileyo mababekwe ukusabalalisa kusekelwe kwinqanaba lokubeka kunye nohlobo lweentengiso. Ininzi eyaziwayo, i-cleaners ehamba phambili idibeneyo idibene neentengiso ezincinci, iivenkile eziphakathi, ivenkile enkulu eninzi iintlobo zotyalo-mali, iindleko zotyalo-mali ezintathu zoluhlu olukhulu, ukucoca imveliso yokucoca ikwahluke kakhulu.
Abacocisi abaqhelekileyo abomileyo ngokubanzi badinga kuphela abacocekileyo abacocekileyo, ii-generator, i-ironing table tableing, iron, impahla yokuhlamba, njl. iimeko, abacocayo abomileyo, kunye nezinga lokusetyenziswa kwendawo, iimeko ezixhasayo zegesi, kunye neemeko zokhuphiswano olumileyo wendawo yokucoca, khetha izixhobo ezifanelekileyo.
Ukucoca i-dryers kunye ne-oyile ecocekileyo yomzimba kunye ne-tetrachlorethylene abacocekileyo abacoca iindidi ezimbini, ngasinye sinomdla kunye neempawu. Ngokubanzi, ezininzi izitya zokuhlamba ezincinane kunye nezincinci zokukhetha ucoceko ococekileyo oyile, kunye neetrachlorethylene ococekileyo ococekileyo ngenxa yokhuselo oluqinileyo, olufanelekileyo kubahlambisi abanzi abomileyo.
Ngoko ke, ukuba utyalomali kwiincinci ezincinci ezicoca, zomisa ivenkile encinane kwinqanaba lase-ENEJEAN Uqwalaselo oluqhelekileyo, lugqityiwe nge-othomathi yowamafutha acocekileyo oomatshini, oomatshini ozenzekelayo, oomatshini wokutshiza ngokuzenzekelayo, i-generator kagesi, insimbi kunye nezinye iintlobo ezinhlanu. izixhobo zokucoca. Ukuba ngaba i-cleaners ephezulu, i-ENEJEAN iyomile yokucoca iivenkile ezinkulu kwi-standard standard B, ifakwe i-tetrachlorethylene ecocekileyo ecocekileyo yomatshini, umatshini ochanekileyo we-frequency oils-use usetyenziso olufanelekileyo, i-dryer frequency conversion , umatshini wesimboli, inkqubo yekhompyutheni yokwenza i-invoyisi kunye nezinye iindidi ezi-13 zokucoca izinto zokusebenza. Ukuba awuyiqondi, nceda nqakraza ukubonisana
Ngasentla kukucwangciswa okulula, kodwa xa sikhetha izinto zokusebenza zokucoca ezomileyo, sisadingeka sibandakanye ukubaluleka kumgangatho wayo. Imilinganiselo yo mgangatho okanye ayikho, ihambelana ngqo nomgangatho woshishino ococekileyo. Ukuba umgangatho wokucoceka oomileyo uvaleka kunjalo, ngokuqhelekileyo kubonakala iphoso, umonakalo wengubo, ngoko kuya kubakho ngokuqinisekileyo ukubiza kubathengi, ngokuqinisekileyo kuya kuba nefuthe elikhulu kwimisebenzi yalo.
I-ENEJEAN eyomile-ecocekileyo kwiminyaka engaphezu kwe-20 yokuphuhliswa, ukuphuculwa kwezinto ezintsha zokugxininisa izixhobo zokusebenza zokucoca, azizange zinciphise. Ngoko ke iteknoloji yecandelo lokucoceka elomileyo liphambi kwamanye amaxabiso. I-tetrachlorethylene ecocekileyo ngokucoca i-tetrachlorethylene, umzekelo, ukusebenzisa umgangatho omgangatho ophezulu wesithathu wesilinda, ukuhlanjululwa kokuhlamba kabini, i-XiJingDu ephakamileyo kakhulu, i-economical and practical, i-cost-effective excellence.
Inqaku lokugqibela: Umatshini wokucoca oomileyo ka...